SD5K Bulldozer |
SD5K waa nooca-track-nooca wadarta cagaf-biyoodka oo leh qayb-adag hakad ah, heerka koontaroolka elektiroonigga ah, nidaamka wadista kontoroolka elektiroonigga ah ee laba-wareeg ah, kontoroolka kontoroolka xiran ee xargaha xargaha ayaa diraya nidaamka hydraulic.
SD5K waa nooca-track-nooca wadarta cagaf-biyoodka oo leh qayb-adag hakad ah, heerka koontaroolka elektiroonigga ah, nidaamka wadista kontoroolka elektiroonigga ah ee laba-wareeg ah, kontoroolka kontoroolka xiran ee xargaha xargaha ayaa diraya nidaamka hydraulic. Daabka PowerAngle-jiidhidda, si toos ah u xakameynaya nidaamka qaboojinta madax-bannaan. Qaabkani waxa uu ku qalabaysan yahay mishiinka korantada ee korantada ee qaabka isbarbardhiga awoodda buuxda, oo leh is-gudbin joogto ah oo isbeddelaya iyo shaqada isteerinka pivot, nakhshad qaabaysan oo fudud si loo dayactiro loona dayactiro; nidaamka socodka kontoroolka saamiga kontoroolka-hydraulic-ga iyo aaladda shaqada ayaa ka dhigaysa hawlgalka mid sax ah oo raaxo leh; Muujinta qalabka isdhexgalka ee bini'aadamka iyo kombuyuutarka, nidaamka adeegga caqliga leh, qaboojiyaha si buuxda u xiran. Waxa lagu qalabayn karaa saddex shanks ripper. Waa mashiin ku habboon oo loo isticmaalo shaqo culus ama culeys culus sida dhismaha dekedda, dhismaha isgaarsiinta, garoonka, mashruuca korontada, dhaqaaqa dhulka magaalada iyo magaalada, qaabaynta dib u buuxinta iyo hagaajinta shaqada.
Miisaanka hawlgalka (ay ku jirto ripper) (Kg): 13100
Cadaadiska dhulka (oo ay ku jiraan ripper) (KPa): 45
Qiyaasta raadraaca (mm): 1790
Min. banaynta dhulka (mm): 315
Awoodda dhallinta (m): 3.1
Balaadhka daabka (mm): 3060
Max. qoto dheer qodista (mm): 460
Cabirka guud (mm): 492230603000
Kacaanka la qiimeeyay (rpm): 2200
Awoodda duuliyaha (KW/HP): 97/132
Max. wareegga (Nm/rpm): 570/1450
Isticmaalka shidaalka ee la qiimeeyay (g/KWh): 190
Nooca: Nooca socodka caadiga ah ee badh-hakinta
Tirada rollers side (dhinac kasta): 1
Dhererka (mm): 190
Horey (Km/h) 0-10.5
Dib u dhac (Km/h) 0-10.5
Max. cadaadiska nidaamka (MPa): 19
Nooca bamka: Bamka biistoonka barakicinta ee isbedbeddelaya
Wax soo saarka nidaamka L/min: 125
Habbeebee Hal-marxalad meere +Hal-marxalad farsamaynta dhimista spur
Hore: SD7K LGP Bulldozer
Xiga: SD6K Buldozer